Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Trinidad and Tobago » Dalxiiska Trinidad oo Dib-u-Xoojin la Sameeyay Nin Cusub oo Mas'uul ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Trinidad and Tobago
Maareeyaha Cusub ee Dalxiiska Trinidad
Dalxiiska Trinidad Limited (TTL) ayaa hadda ku dhawaaqay magacaabista Sarkaalka Sare ee Fulinta ee ururka. Kurtis Rudd ayaa loo magacaabay inuu noqdo ninka cusub ee mas'uulka ah, wuxuu dhaqan galayaa 2 maalmood kahor 20ka Sebtember 2021.
Tani waxay ahayd mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa ee safarka iyo dalxiiska ee Trinidad, waxaana loo baahan yahay hoggaan cusub oo mideeya waaxda.
Kurtis Rudd oo leh hamigiisa nololeed ee dhismaha sumcadda iyo jaceylka aan xad lahayn ee dalka, Kurtis Rudd wuxuu si joogto ah u doonayay inuu u adeego dhulka uu ku dhashay.
Rudd wuxuu sheegay inuu ku faano inuu mas'uul ka yahay kor u qaadista hantida dalxiiska ee jasiiradda.
Kurtis Rudd wuxuu keenaa in ka badan 25 sano oo waayo -aragnimo maareyn sare ah oo ay weheliso suuq -geyn ballaaran, isgaarsiin istiraatiiji ah, iyo khibrad maamul oo caawin doonta Dalxiiska Trinidad maadaama ay dib u xoojinayso dhaqaalaha dalxiiska jasiiradda. Tani waxay ahayd mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa ee safarka iyo dalxiiska ee Trinidad, waxaana loo baahan yahay hoggaan cusub si loo mideeyo waaxda loona qeexo waddo cad oo si nabadgelyo leh dib loogu bilaabo safarada caalamiga ah.
Kurtis Rudd oo leh hamigiisa nololeed ee dhismaha sumcadda iyo jaceylka aan xad lahayn ee dalka, Kurtis Rudd wuxuu si joogto ah u doonayay inuu u adeego dhulka uu ku dhashay. Wuxuu qabtay dhowr jagooyin maareyn oo sarsare oo leh shirkado macaamiil hogaamiya gudaha iyo Kariibiyaanka oo ay ku jiraan Shell Caribbean, Prestige Holdings Limited, Courts Trinidad Limited, iyo Guardian Life.
Markii uu aqbalay ballanta, Kurtis Rudd wuxuu yiri: “Waan ku faanayaa inaan ku biiro kuwa kala duwan iyo kuwa kartida leh Kooxda Dalxiiska Trinidad lagu soo oogay mas'uuliyadda kor u qaadida hantida dalxiiska ee gaarka ah oo aan caadiga ahayn ee jasiiraddeena adduunka intiisa kale. Waxaan joognaa waqti xasaasi ah oo ku saabsan horumarinta warshadaha dalxiiska ee Trinidad, waxaanan u baahanahay iskaashiga istiraatiijiyadeed ee waaxda gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah si looga faa'iidaysto fursadaha suuqa ee ka horreeya oo looga baxo masiibadan. Waan ku faraxsanahay inaan helo fursad aan kula shaqeeyo Guddiga Agaasimayaasha, oo uu hoggaaminayo Cliff Hamilton. Waxaan nasiib u leenahay inaan helno qof heerkiisa iyo khibradiisa dalxiisnimo caalami ah oo hoggaamiya ururka. ”
Mr. Rudd wuxuu ku soo gunaanaday, “Runtii kani waa shaqadayda riyada, waxaanan rajaynayaa inaan la shaqeeyo Wasaaradda Dalxiiska, Dhaqanka, iyo Fanka iyo dhammaan daneeyayaasha qaabaynta iyo wadista ajendaha waaxda dalxiiska si loo gaaro waaritaan dheer iyo koboc loo dhan yahay. . ”
Kurtis Rudd oo ka qalin-jabisay Kulliyadda Fatima, wuxuu haystaa Master of Business Administration (MBA), Maaraynta Guud oo ka socda Kulliyadda Maareynta Henley, UK, waana bare sare oo ka tirsan UWI-ROYTEC. Wuxuu guursaday 25 sano, Kurtis Rudd wuxuu ku mashquulay meherad ganacsi oo deg deg ah nolosha qoyska wuxuuna aad u aaminsan yahay isku dheelitirka nolosha shaqsiyeed iyo xirfadda xirfadeed.
dan.pimental wuxuu leeyahay,
September 23, 2021 at 09: 28
Waa inaad tustaa nuqul daabacan ama elektaroonig ah shirkadda diyaaradaha si aad u raacdo duulimaadkaaga. Dhamaadka taas oo ah jaceylka jaceylka ah ee dalxiisayaasha ay u qabaan dadka maxalliga ah meelo badan oo Caribbean -ka ah.